ch3ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch3ယောဟန်သည်
3:2 He went to Jesus at night, သူကသူ့ကိုအားဆို၏: "အရှင်ဘုရား, we know that you have arrived asateacher from God. For no one would be able to accomplish these signs, which you accomplish, unless God were with him.”
3:3 ယရှေုသညျမှတုန့်ပြန်နှင့်ဟုပြောသည်, "အာမင်, အာ, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, unless one has been reborn anew, he is not able to see the kingdom of God.”
3:4 Nicodemus said to him: “How couldaman be born when he is old? အကယ်စင်စစ်, he cannot enterasecond time into his mother’s womb to be reborn?"
3:5 ယရှေုသညျတုန့်ပြန်: "အာမင်, အာ, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, unless one has been reborn by water and the Holy Spirit, he is not able to enter into the kingdom of God.
3:10 ယရှေုသညျမှတုန့်ပြန်နှင့်ဟုပြောသည်: “You areateacher in Israel, and you are ignorant of these things?
3:11 အာမင်, အာ, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, that we speak about what we know, and we testify about what we have seen. But you do not accept our testimony.
3:13 အဘယ်သူမျှမကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီဖြစ်ပါတယ်, ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်တော်မူသောသူမှတပါးအဘယ်: ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်လူသား.
3:14 တဖန်မောရှေသည်တော၌မြွေကိုချီမြှောက်မယ့်အဖြစ်, ဒါကြောင့်လည်းလူသားချီရပါမည်,
3:15 ထို့ကြောင့်အကြင်သူသည်သူ့ကိုယုံကြည်သောပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ.
3:16 ဘုရားသခင်အဘို့ဤမျှသူသည်မိမိအသာတစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးသောကမ္ဘာ့အခစျြရ, ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မစေခြင်းငှါဒါ, ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ.
3:17 ဘုရားသခငျသညျဤလောကသို့မိမိသားတော်မပို့ခဲ့သည်ကို, လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်နိုင်ရန်အတွက်, ဒါပေမဲ့နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာသူ့ကိုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း.
3:22 ဤအရာတို့ကိုပြီးနောက်, ယေရှုနဲ့သူ့တပည့်သည်ယုဒပြည်သို့သွားလေ၏. ထိုမင်းသည်သူတို့နှင့်အတူရှိနထေိုငျမြားနှငျ့ဗတ်တိဇံကိုခံခဲ့ရ.
3:23 အခုတော့ဆရာယောဟနျလည်းဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရ, Salim အနီး Aenon မှာ, များစွာသောရေကိုအရပျ၌ရှိ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ထိုသူတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်နှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံ.
3:25 ထိုအခါအငြင်းပွားမှု John နှင့်ယုဒအမျိုး၏တပည့်တို့အကြားဖြစ်ပွား, သန့်စင်အကြောင်းကို.
3:26 ထိုသူတို့ကယောဟန်အား သွား. အထံတော်ကဆိုပါတယ်: "အရှင်ဘုရား, ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သူတဦးတည်း, အဘယ်သူကိုအကြောင်းသင့်သက်သေခံချက်ကိုကမ်းလှမ်း: ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သူ၌ဗတ်တိဇံသည်လူတိုင်းအတွက်သူ့ကိုသွား၏။ "
3:27 ယောဟန်သည်တုန့်ပြန်ဟု: "လူဘာမှမခံယူနိုငျဘဲဖြစ်ပါတယ်, ကကောင်းကင်ကနေသူ့ကိုခံရပြီမဟုတ်လျှင်.
3:28 သင်တို့သည်ငါကလည်းငါ့အဘို့သက်သေခံချက်ပူဇော်, '' ငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်,'' ဒါပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာငါစေလွှတ်တော်မူခဲ့ကြပြီ.
3:29 သတို့သမီးရရှိထားသူသောသူသည်သတို့သားဖြစ်ပါသည်. သို့သော်သတို့သား၏မိတျဆှေ, အဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်ကိုမှရပ်များနှင့်စကားကိုနားထောငျ, သတို့သား၏စကားသံမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း. ဆိုတော့, ဤ, ငါဝမ်းမြောက်စရာ, မပြည့်စုံခဲ့ပြီး.
3:30 သူတိုးမြှင့်ရပါမည်, ငါဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိရမည်စဉ်.